INdawo yeNkundla yaseTara
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguChris And Nancy
Igumbi lestudiyo eliqaqambileyo nelihle elincanyathiselwe kwisitrato esithuleyo sasebumelwaneni esingekude ne-TAMU kunye nazo zonke izenzo!
Ikhitshi eligcweleyo, ibhedi elingana nokumkanikazi etofotofo, ibhafu ebanzi, ishawari yokuhamba ngamanzi ashushu angenasiphelo kunye nendawo yokuphumla okanye ukwamkela abahlobo abambalwa kwisidlo sangokuhlwa!
Ukungena kwabucala okungenazitshixo, intendelezo yabucala, indawo yokupaka elula, iWiFi elungileyo, iTV ehlakaniphile eneYouTube TV/Netflix (okanye ungene kweyakho), ufikelelo olugcweleyo lokuvasa impahla (isepha inikezelwe), ulawulo lobushushu, kunye neelinen/iitawuli ezibonelelweyo.
Sijonge phambili ekwamkeleni kwipropathi yosapho lwethu. Uya kuba nendlu yakho yestudiyo eqhotyoshelweyo, enendawo yokungena yabucala kunye nentendelezo. Ukuba ufuna indawo ethe chatha, sineyadi enkulu yangasemva kwaye sipakishe kwelinye icala locingo lwethu kunye nendlela yokuhamba, i-oki ephilayo yokuhlalisa i-hammocking kunye nenkundla yebhola yomnyazi egcinwe kakuhle.
Sinenjana eneminyaka esi-8 ubudala egama linguBooker. Ukhonkotha ngokungaqhelekanga kwaye akavunyelwa ukuba angene endlwini, ukuyigcina ingenalo ukwaliwa. Siyathemba ukuba ukuhlala kwakho kuzolile kangangoko, kodwa nceda wazi ukuba ixolo okanye ezimbini zinokwenzeka ngelixa uhlala nathi!
4.99 · Izimvo eziyi-96
Ukuphuma nje kuhola wendlela 6 kunye neHarvey Rd. Kufuphi nePost Oak Mall kunye neendawo zokutyela ezininzi. Imizuzu emi-3 ukuhamba ukusuka kwi-Aggie Spirit Bus Stop, iMerry Oaks Park kunye nelophu yokuhamba, iinkundla zebasketball, kunye nebala lokudlala. Imizuzu eyi-7 yokuqhuba ukuya eReed Arena kunye neKyle Field. Imizuzu emi-2 ukuya kwiVeteran's Park.
Umbuki zindwendwe ngu- Chris And Nancy
Usapho lwethu lungathanda ukuhlonipha ubumfihlo bakho okanye ukunxibelelana nawe kwaye sikuncede ukonwabele iSikhululo seKholeji yaseBryan ngayo nayiphi na indlela esinokuyenza! Ukusuka ekuncedeni ufumane indawo yokutyela egqibeleleyo yomsitho, icawa yasekhaya onokuthi uyindwendwele, okanye iinketho zokuthenga zesixeko sethu esikhulayo, siyathemba ukuba ukuhlala kwakho kwiNdawo yeNkundla yaseTara kuya kuphumla kwaye kukulungele iimfuno zakho.
Usapho lwethu lungathanda ukuhlonipha ubumfihlo bakho okanye ukunxibelelana nawe kwaye sikuncede ukonwabele iSikhululo seKholeji yaseBryan ngayo nayiphi na indlela esinokuyenza! Uk…
UChris And Nancy yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- College Station